HORDHAC : Man City VS Leicester City? Kaga bogo macluumaadka kulankan oo dhameestiran iyo safafka macquulka ah ka hor kulanka – Gool FM
Bashiir May 6, 2019
(England) 6 Maajo 2019 Kooxda Man City ayaa ciyaar xiiso badan garoonkeeda kula qaadaneysa Kooxda Leicester City oo ah koox aan sahlaneen.
Loolanka horyaalka ayaa ha mid adag oo u dhexeeya Kooxda Liverpool oo hada si ku meel gaar hogaanka u heysa iyo Man City oo ku qasban caawa guul si ay ula wareegto hogoominta horyaalka.
Wararka labada Kooxood ka hor kulanka:
Kubad sameeyaha Manchester City Kevin De Bruyne ayaa seegi doona kulankiisii seddexaad oo xiriir ah sababo dhaawac ka soo gaaray muruqa.
Dhinaca kale Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Fernandinho ayaa weli dhaawac ka qaba jilibka waxaana shaki laga gilinayaa kulankan , halka Claudio Bravo uu muddo dheer maqnaanayo.
Geesta kale Tababaraha Leicester Brendan Rodgers ayaa soo wariyay inuusan jirin dhaawacyo cusub oo kooxdiisa ah ka hor kulanka Man City.
Kaliya xidigaha ka maqan safka Kooxda Leicester City waa Daniel Amartey iyo Matty James oo seegi doona kulanka caawa.
Kulanka : Man City VS Leicester City? (Premier League)
Goobta : Etihad Stadium
Garsoorka :Mike Dean
Xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ciyaarta ka hor inta aan la baasan :
Manchester City ayaan guul sax ah ka gaarin Kooxda Leicester xili ciyaareedkan, ka hor kulanka caawa waxa ay soo wada kulmeen labo jeer kulanka hore oo horyaalka ahaa Leicester ayaa 2-1 ku garaacday dhigeeda Man City, halka kooxda Man City ay rigoorayaal ay ku reebtay Kooxda Leicester kulan ka tirsanaa afar dhamaadka tartanka Carabao Cup.
Leicester ayaa eeganeysa in ay dhameestirto in markii ugu horeysay ay kooxda Man City ka adkaato labada kulan ee horyaalka tan iyo 1986-87.
Kooxda Man City ayaa dhalisay 28 gool 7-dii kulan ee ugu dambeeyey ee ay garoonkeeda kula ciyaartay Kooxda Leicester, cel-celis ahaan waxaa kulankiiba laga dhalinayey 4 gool.
Sky Bule ayaa badisay 17 ka mid ah 18- kulan oo ay garoonkooda ku ciyaaraan sanad ciyaareedkan 2018-19, kaliya waxa ay dhibco lumiyeen bishii December markaas oo qasaaro 3-2 ay kala kulmeen Crystal Palace.
Vardy ayaa dhaliyey 31 gool marka uu wajahayo lixda kooxood ee ugu sareeya horyaalka tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay ee Premier League xili ciyaareedkii 2014-15
Macalin kooxda Leicester ee Rodgers ayaan guuleysanin shantii kulan ee uu booqday garoonka Kooxda Man City tartamada oo dhan (2 bar-baro iyo 3 qasaaro ).